Nhau - Maitiro Ekugadzira Muzhizha Izvo Zvisiri Greasy Uye Hazvibvise!
Kubva kutanga kwezhizha, iwo mukuru musoro wemusoro kune fairies seni vasingamiri kuteedzera kunaka kuri kubvisa kwavo magadzirirwo muzhizha, kunyanya kana iko kugadzirwa kuchipisa uye iko kwekuumbika kunonyungudika. Mushure mehafu yeawa yekukomba kwakakomba, inoshanduka kuita hombe kupenda kumeso. Ichokwadi chaizvo. Kuchema zvinonzwika!
Tichifunga nezve chokwadi chekuti dambudziko iri rakajairika uye rinoitika kuvasikana vemarudzi ese eganda, nhasi isu takakoka nyanzvi nyanzvi dzemasikirwo evarairidzi vadzidzisi kuti vabe zvakavanzika zvezhizha zvinogara zvakagadzirwa!
Chekutanga pane zvese, ngatijekesei mashoma mashoma akakosha mibvunzo:
Sei uchibvisa makeup yako?
Pane zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tibvise zvigadzirwa zvedu: kudikitira, sebum, uye kupera mvura kweganda.
Kudikitira chinhu chatisingagoni kudzivisa muzhizha. Hanzvadzi diki zhinji dzakatiwo kuti vagadzire maumbirwo avo kuti agare kwenguva yakareba, vanosarudzawo kushandisa zvigadzirwa zvekuzora, zvakaita seupfu hwakasununguka, hupfu, uye poda yekuzora, asi vanofanirwa kubvisa makeup kana kuabvisa. Dambudziko riripo Riripi?
Kune zviuru nezviuru nzira zvekugadzirisa zvigadzirwa paInternet, asi iwe unofanirwa kuona kuti uri rudzii rweganda, wobva wasarudza yakakodzera yekumisikidza chigadzirwa uye nzira, zvikasadaro ganda rakaoma rinongooma uye kuoma, uye ganda rine mafuta inobvisa zvigadzirwa nekukurumidza!
Semuenzaniso, ganda rakaoma harina kukodzera nzira yesandwich yekumisikidza, ingoshandisa yakasununguka poda munharaunda mune t zone; yeganda rine mafuta, usashandise dhairekitori yeupfu husina kuseta yekumisikidza kumisikidza, asi kumeso kwekugadzira kunenge kuri kutenderera hupfu mask!
Kunakidzwa kweganda kusati kwadzorwa
Iyo yakanakisa mamiriro eganda ndeyekuti haina kwayakarerekera uye haina mafuta, asi mhando yerudzi rweganda iyi inogona kunzi inonetsa kukura nezuva nezuva. Isu tine ganda rakaoma, ganda rine mafuta kana rakasanganiswa ganda.
Chikamu chakakura chechipingaidzo chekunyorova paganda muzhizha ndechekuti stratum corneum yakanyanyisa, saka ndaiwanzopukuta ganda zvinyoro nyoro nekotoni pad yakanyoroveswa mutoner mushure mekuchenesa, ndokuitora pamusoro pehuro nekumashure nzeve. Pane zvikonzero zviviri zveizvi. Chekutanga kubvisa guruva netsvina kumeso, uye chechipiri kudzikamisa ganda nekuita kuti rinyurwe zviri nani nekutarisirwa kweganda kunotevera.
Mushure meizvi, enderera neyechipiri toner kunyorera, uye iyo mbiri-rukoko moisturizing mhedzisiro ichave iri nani. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mwero wese wekushisa unowedzera muzhizha unowedzera huwandu hwemafuta pachiso ne20%. Kana chete pakawana mvura inokwana ndipo panogona kunge pakaenzana mvura nemafuta zvikasanyanyoenzana.
Nekuti iwe uchafanirwa kuisa sunscreen uye base base mune yekutevera, iwe unofanirwa kusarudza inozorodza uye yekunyorovesa mafashoni eichoicho uye kirimu zvigadzirwa masikati. Mafuta mashoma ekudzora oiri ndiyo yakanakisa, zvikasadaro zvakare mafuta anokanganisa iyo inotevera sunscreen firimu kuumbwa kumeso. Iyo yekumusoro yekugadzira haisi nyore kunamatira kune ganda!
1. Sarudza Iyo Yakakodzera Makeup Zvigadzirwa
Sezvambotaurwa pamusoro apa, nzira dzakakodzera dzekumisikidza uye zvigadzirwa zvemhando dzakasiyana dzeganda zvakasiyana, uye zvakakamurwa kuita mhando mbiri: ganda rakaoma uye ganda rine mafuta. Marongero ezvigadzirwa pamusika anosanganisira yakasviba poda, poda keke, kuisa spray, nezvimwe ...
Hupfu hwakasununguka uye huchi hupfu keke zvinongoonekwa mumhando dzakasiyana. Imwe ine hupfu hwekushandisa pamba, uye imwe yacho yakamanikidzwa kuita keke rekutora. Muchokwadi, izvo zvakakosha zvigadzirwa zvehupfu zvakare silika, talcum poda, titanium dioxide, zinc oxide, nezvimwe. Hongu, ivo vanonwisa oiri yakawandisa kumeso.
Iro zita reChirungu rehupfu iyi upfu hwaro, inova upfu hwaro chigadzirwa. Unogona kuishandisa senheyo yekugadzira uye haufanire kushandisa zvigadzirwa zvehupfu kumisikidza makeup mushure!
Kune nzira dzakawanda dzekumisikidza makeup spray. Hazvina mhosva kuti mangani masisitimu anowedzerwa mukushambadzira, muviri mukuru imufirimu wekare. Iyo firimu yaimboita firimu rekudzivirira pachiso chako. Izvo hazvizoshandure chimiro pane chako kumeso Pane kubwinya.
Iko kunakirwa kweiyo yekumira spray ndeyekuti inogona kunetesa iyo poda kunzwa kweyekushongedza kumeso uye kuita kuti ive yakasununguka. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti zvisinei kuti mangani emafuta ekudzora zvigadzirwa akawedzerwa, iyo chaiyo mhedzisiro haina kuita senge iyo mhedzisiro yekusununguka poda poda keke mafuta kudzora uye kumisikidza makeup!
Iyo yekumisikidza yekuisa spray zvakare iri kuita zvakawanda, sekunge inogona kusanganiswa mune hwaro kuita kuti hwaro hurambe huchibwinya uye kupenya, uye iyo yekumisikidza yekuisa spray inogona kushandiswa mushure meiyo nzira yekubheka kunetesa iyo powdery kunzwa. Asi y1s1 ganda rine mafuta harina kukodzera kumisikidza yega, ichave yakanyanyisa uye inokodzera ganda rakaoma.
2. Maitiro Ekusetesa Makeup Kune Akasiyana Ganda Mhando
Kazhinji kutaura, ganda rakaoma hariburitse mafuta mazhinji pamatama, uye zviri nyore kuti T zone nematama abudise mafuta uye kubvisa makeup. Mudzidzisi Jianxing anokurudzira kushandisa fluffy yakasununguka yeupfu bhurashi kune yakasarudzika makeup, saka usabhenekera uye uteerere kune iyo tekinoroji!
Dhidzai hupfu hwakatsetseka hwehupfu uye zvinyoronyoro pfuurira iyo T zone, mhino, chin, uye nekunze contour kumucheto.
Nekuti huwandu hwemafuta hunogadzirwa neganda rakaoma ishoma panguva ino, saka chingotsvaira hupfu hwakasara hwakasununguka pabhurasho. Uchienzanisa zviso zvekuruboshwe nekurudyi, zviri pachena pachena kuti iwe unogona kuona kuti iro reruboshwe kumeso ndiko kugadzirwa kweiyo microdermabrasion, zvachose!
Kune ganda rine mafuta, zvinokurudzirwa kushandisa yakasununguka poda + yekumisikidza kumisikidza kudzora mafuta + chengetedza makemikari pasina kukundikana Mudzidzisi Jianxing zvakare ane chekutaura nezve mashandisiro ekuzora makeup.
Iyo inonyatso kuzivikanwa T uye X nzira dzekupfapfaidza hadzina kukodzera kumisikidza yekuisa mapiritsi. Kusiyana neAvène pfapfaidzo yatinoshandisa, inova tangi regasi, simba rekusipiresi rine rakati siyanei. Jianxing inokurudzira kushandisa matatu-pointi marongero ekugadzira.
3.Corose Makeup Kuti Uwedzere Yakagara Nguva
Kunyangwe isu takatove takapedza nguva yakawandisa pane yekuzora uye yepasi yekuzora, hapana imwe nzira yekubvisa iyo yekuzora isingaregi pane yakanyanya tembiricha. Kugadzirwa kwemake-up kwave kuita sarudzo inodiwa kuti tiwedzere nguva yedu yekumira.
Isu takaunganidzawo yakawanda mibvunzo kubva kuhanzvadzi. Chaizvoizvo, paunonyanya kubata iyo yekuzora, iyo inorema iyo yekugadzira ichave iri. Iyo yekugadzira mushure mekupenda ichawana oiri uye inobvisa iyo makeup nekukurumidza. Saka dambudziko nderei?
Nhanho yekutanga yekuzora makeup kunze ndeye kutora mafuta akawandisa kumeso usati waisa makeup. Vangani vanhu vasina kuita nhanho iyi, ndapota simudza ruoko rwako, zvikasadaro zvakasikwa kuti hupfu hwonamatira wakanangana nechiso chine mafuta, uye zvinotora nguva yakareba. Iyo yekugadzira ichave inotyisa chidimbu chidimbu!
Asi kutaura chokwadi, zvinonetsa chaizvo kuunza mafuta-anopinza matissue kana uchienda kunze. Mudzidzisi akandidzidzisa hunyanzvi hwekubata-poda kunze.
Kutanga tora chidimbu chepepa tauro uye uripinze, peta diagonally uye diagonally kutsiva bepa rinobata, wobva wadzvanya kuti utore mafuta. Pakona inoratidzwa mumufananidzo unotevera, pinda pamatama, mhino, uye T zone kuti ubvise mafuta akawandisa.
Dhinda kugadzirisa pahuma nechirebvu, pusha zvigunwe kumeso, uye tendeuka rimwe divi rechiso pamusoro uye shandisa nyama kune rimwe divi.
Iyo yakanyanya kurova nzvimbo paunobvisa makeup yako paunobvisa mhino dzako, pamusoro pemapapiro emapapiro, mhino zvakare chikamu chemhino chinounganidza kupenya kwemafuta. Usakanganwa!
Mushure mekutora mafuta, zvaive zvakasikwa kuisa pahupfu, uye VaJianxing vakamupawo nzira yakasarudzika yekubata. Kana iwe ukashandisa zvakananga hupfu hwehupfu kuti ubate kumusoro, huwandu hwehupfu huchave hwakawandisa, izvo zvinogona kukonzeresa kuti mameji anzwe kurema, uye idambudziko pasi pehukama hwevanhu!
Rongedza upfu hwehupfu nenzira inotenderedza uye zvinyoronyoro uchikwesha pamusoro pechikamu chakakomba kwazvo chemagadzirirwo, kuitira kuti kugadzira kwacho kunyatsove kwakaringana uye kusanyanya hupfu!
Kune matama, ingo flick poda yakasara mushure mekubata-kumberi kumberi, kuitira kuti kubata-kure kurege kurema, kureruka, uye kusimba!
Post nguva: Jul-14-2021
Iyi Kalocils Runako brand kubva kuNanchang Weiti Technology Co, Ltd inozivikanwa pakugadzira eyelashes dzenhema, eyeliner, lip gloss, eyeshadow, mascara etc.Variety runako zvigadzirwa zvigadzirwa zvinogona kusarudzwa kubva kwatiri. Kalocils Runako mhando yakasimbiswa 2019, asi isu tine makore gumi gumi ekugadzirwa kwekugadzira uye kutumira kunze ruzivo.Zvezvino, isu tine dzakatenderedza 3000 mativi mita yemusangano uye vanopfuura zana vakagadzika vashandi. Yedu yegore yekutengesa kukosha inodarika US $ 3000,000. Ndinovimba tinogona kusimbisa kwenguva refu bhizinesi hukama uye kuita kuti tese kubatsirana kuzadzike.
Eyelash Kuwedzeredza, eyeliner, Ziso Lashes, Vatengesi ve Eyelash, eyelashes enhema, mink lashes,